ဘရာတွေကို ဘယ်အချိန်မှာ လျှော်ရမလဲ?
ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေဟာ အဝတ်အစား ဖက်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ခေတ်အလိုက်ဝတ်ရတာကတစ်မျိုး၊ ရာသီဥတုနဲ့ သွားလာရမယ့်နေရာပေါ်လိုက်ပြီး ဝတ်ရတာကတစ်ဖုံ စသဖြင့် အဝတ်အစားကို ဂရုစိုက်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ အပေါ်ယံလူမြင်တဲ့ အဝတ်အစားကို ဦးစားပေးနေမိပေမဲ့ အတွင်းခံအဝတ်အစားကိုတော့ သိပ်ပြီး အလေးမထားတတ်ကြဘူး။ အတွင်းခံအဝတ်အစားဟာ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား ပိုမိုလှပသွားအောင်လည်း ကူညီပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ဝတ်ဆင်နည်း၊ ထိန်းသိမ်းနည်း မမှန်ရင်လည်း ကိုယ့်အလှကိုပျက်စီးစေပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ ဘရာကို ဘယ်လိုလျှော်ဖွပ်ထိန်းသိမ်းမလဲဆိုတာ ပြောပြပါ့မယ်။
ဘရာကို မကြာခဏလျှော်ဖွပ်တာ မကောင်းပါဘူး။ တင်းရင်းမှု လျော့ကျသွားလို့ ဝတ်လိုက်ရင် ချောင်လာပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်နဲ့မတော်ဘဲ ချောင်နေတဲ့ဘရာကို မဝတ်သင့်ဘူးနော်။
၂။ ဘယ်တော့မှ လျှော်ရမလဲ?
ဒါကတော့ ကိုယ့့်ရဲ့နေထိုင်လှုပ်ရှားပုံပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများလို့ ချွေးထွက်များပြီး ဘရာကညစ်ပတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ လျှော်သင့်တာပေါ့။ ကိုယ်က ချွေးအရမ်းထွက်တဲ့လူမို့လို့၊ ညစ်ပေပြီး ဝတ်မရတော့လောက်အောင် ဖြစ်သွားလို့ ဆိုတော့မှ လျှော်သင့်ပါတယ်။ ချွေးမထွက်၊ ဖုန်နဲ့ကြေး(ဂျီး) မကပ်ဘဲ ဝတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ ၃ ကြိမ်လောက်အထိ ဝတ်ပြီးမှ လျှော်သင့်ပါတယ်။ တစ်ကြိမ်ဝတ်ပြီးတိုင်း တစ်ကြိမ်မလျှော်ဘူးဆို ဘရာက အချိန်ကြာကြာထိ ဝတ်လို့ရနေဦးမှာပါ။
ဘရာများများ ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းက အလှည်ကျဝတ်လို့ရပါတယ်။ တစ်ထည်တည်းကို မကြာခဏဝတ်နေရင် အဲ့ဒီတစ်ထည်က မြန်မြန်ပျက်စီးသွားရော။ ညအိပ်ရင်လည်း ဘရာကိုချွတ်အိပ်ပါ။ ရင်သားတွေက သဘာဝအတိုင်းရှိနေဖို့ အချိန်ပေးမှ တင်းရင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘရာလျှော်ထားတာ မခြောက်သေးလို့ လေနဲ့မှုတ်ပြီး ခြောက်အောင်လုပ်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ပုံစံပျက်သွားပြီး လျော့တိလျော့ရဲ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ သဘာဝအတိုင်းပဲ အခြောက်ခံတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဘရာတွေကို ခေါက်ပြီး မသိမ်းရဘူးနော်။ သူ့ပုံစံခွက်လေးကို မကွေး၊ မခေါက်စေဘဲ ပုံစံတကျ အနေအထားလေးနဲ့သာ သိမ်းရပါမယ်။ သိမ်းတာမမှန်လို့ ပုံပျက်နေတဲ့ဘရာကိုဝတ်မိတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ ရင်သားအလှပါပျက်သွားနိုင်တယ်။